Agadir, မော်ရိုကိုအတွက် ဦး တည်ရာကို ခရီးသွားသတင်း
Agadir, မော်ရိုကိုအတွက် ဦး တည်ရာ
Mariela Carril | | မော်ရိုကို, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
အားလုံးဖြတ်သန်းသွားသောအခါ visitors ည့်သည်များကိုစောင့်နေလိမ့်မည်။ ခရီးတိုတိုသွားရင်ကော မော်ရိုကို? ဘယ်လိုနည်းနည်းခရီးသွားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ကော? Agadir? မြို့က Rabat ကနေ 600 ကီလိုမီတာ နှင့်ကျော်လူကြိုက်များ Casablanca မှ 400 ကျော်။
Agadir တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကမ်းရိုးတန်းမြို့အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်၊ တောင်တန်းများနှင့်ကမ်းခြေများအကြားရှိညှပ်ညှပ်။ မော်ရိုကိုရှိအခြားနေရာများနှင့်ကောင်းစွာဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသွားပြီးတစ်နေရာထက်ပိုသိလိုလျှင်။
2 Agadir ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Agadir ၏ပင်လယ်ကွေ့၌တည်၏Atlas တောင်တန်းများသည်ပင်လယ်သို့ရောက်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာတန်ဂျီးယား၊ မာရာရက်ခ်၊ ကက်ကဘလက္ကာနှင့်ရာဘတ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သောအခွန်ကောက်သည့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို အသုံးပြု၍ လေယာဉ်ဖြင့်ခေတ်မီသောလေဆိပ်ရှိပြီးကားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
Agadir မော်ရိုကို၏တောင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် နှင့် ပူနွေးခြောက်သွေ့သောအပူပိုင်းရာသီဥတု။ တောင်များမှသဲကန္တာရလေများမှအကာအကွယ်ပေးပြီးပင်လယ်လေပြင်းများခံစား။ အမှန်တရားမှာ Agadir ဖြစ်သည် ကောင်းတဲ့ခရီးပဲ spaတိုင်းပြည်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ် ဦး ။ နွေရာသီတွင်ရေသည် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိပြီးဆောင်းရာသီတွင်ပင်ရာသီဥတုသာယာသည်ဟုစဉ်းစားပါ။
၎င်း၏သမိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း Agadir ၎င်းကို ၁၆ ရာစုတွင်ပေါ်တူဂီတို့ကတည်ထောင်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့် Saadians လာမယ့်ရာစုနှစ်ကကျူးကျော်ဖျက်ဆီး။ ၂၀ ရာစုအစတွင်မှသာ၎င်းကိုအလေးအနက်ပြန်လည်တည်ဆောက်လိမ့်မည် ပြင်သစ်အလုပ်အကိုင်။ ဤနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်၎င်းသည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအကုန်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုလက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူများသည်အဟောင်းအဆောက်အ ဦး တစ် ဦး သို့ကျဆင်းခဲ့သည် ယခုနှစ် 60 အတွက်ငလျင်, ဒါကြောင့်၎င်း၏ခေတ်သစ်ကြည့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးနောက်အပေါ်ကြာပါသည်။
၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းသည်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သော်လည်းစိုက်ပျိုးရေးကဏ္cတွင် citrus အမြောက်အများထုတ်လုပ်သည်။ မြေငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် မော်ရိုကိုမှာရှိတဲ့ခေတ်သစ်မြို့ကြီးများထဲကတစ်ခုအဆောက်အအုံကြီးများ၊ ကျယ်ပြန့်သည့်လမ်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များစွာရှိသည်။
ဒါဟာ ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်း ဟိုတယ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအလွန်ကောင်းကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူ။ ဒုတိယအတွက်အဓိကခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် Souss-Massa အမျိုးသားဥယျာဉ်လှပသောရှုခင်းများနှင့်အတူ။ ၎င်းကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၃၄၀၀၀ ဟက်တာနီးပါးရှိသောအတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်lowရိယာနိမ့်ပြီးချိုင့်ဝှမ်းချိုင့်များနှင့်ပင်လယ်ဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။
ဒါဟာပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သည် ကြီးမားသောဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ လူတွေနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးကလူကြိုက်များ ဦး တည်ရာဖြစ်စေအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့် ornithological ခရီးသွားလုပ်ငန်း, မော်ရိုကိုအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခု။
အကယ်၍ သင်ကမြို့ကြီးများကိုမသွားလိုလျှင်၊ ကတ္တရာ၊ ပြတိုက်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်သင်၏အရာဖြစ်ပါက၊ သင်သည် Agadir ၏အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ နေ၍ ဤနေရာတွင်ကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာကိုလက်လွတ်မသွားနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဗလီများ၊ ပြတိုက်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ပန်းချီကားများရှိသည်။
သင်ခရီးစဉ်စတင်နိုင်ပါသည် Nuevo Talborjt, ကိုလိုနီခေတ်ရပ်ကွက်၎င်း၏အာရပ်ဥယျာဉ်နှင့်တကွ, Olhao ဥယျာဉ်များavenida de las Far ပေါ်မှာ။ ဒီမှာပါ မှတ်ဉာဏ်ပြတိုက် ၎င်းသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစုစည်းဖော်ပြပေးထားသည် Ibn Zidoum ဥယျာဉ်များ။
အ Kasbah နံရံများ ၎င်းတို့သည်၎င်း၏သမိုင်းဝင်ဘဏ္asuresာများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးခိုင်ခံ့သော Agadir မြို့၏ကျန်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မူလရည်ရွယ်ချက်မှာမြို့တော်ကိုပင်လယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် ၁၆ ရာစု မှစတင်၍ ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကလူများစွာသည်ထိုနံရံများနောက်ကွယ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤနံရံများနှင့်ဂိတ်များကိုနူးညံ့သောတောင်ကုန်းပေါ်နှင့်အတူကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည် မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ လှပသောမြို့နှင့်ပင်လယ်။ နေဝင်ချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးသည်။
မြို့တော်၌တည်ရှိ၏ မဟာဗလီ အခြားဗလီများနှင့်ထူးခြားသည် Amazigh ပြတိုက် ယင်း၏ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူ Tiskiwin ပြတိုက်ဘာဘာအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုရည်စူးသည်။ Agadir Memorial Museum လည်းရှိတယ်။ Avenida Presidente ကနေဒီကိုကြည့်ပြီး '၆၀ ငလျင်လှုပ်တာကိုမှတ်မိနေပြီ' လို့ပြောတယ်။ အဲဒီဘေးအန္တရာယ်မတိုင်မီကမြို့ကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်။
La agadir ကမ်းခြေ လှတယ် အဆိုပါ boardwalk နှင့် Marina လမ်းလျှောက် သူတို့ကတန်ဖိုးထားဖို့ကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ လမ်းဘေးစင်္ကြံသည်စွန်ပလွံပင်များနှင့်ကြွေထည်များခင်းထားသော ၅ ကီလိုမီတာသာယာသည့်လမ်းလျှောက်မှုကိုပေးသည်။ Marina သည်မကြာသေးမီကတည်ဆောက်ခဲ့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးသင်လှေစီးလိုလျှင်သင်ဒီမှာစတင်သင့်သည်။ ထို့နောက်ကမ်းခြေရှိဟိုတယ်များနှင့်ကဖေးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်နေအိမ်များနှင့်ထီးများကိုငှားရန်နေရာများရှိသည်။
လုပ်နိုင် Agadir မှနေ့ခရီးများသို့မဟုတ်လေ့လာရေးခရီးများလုပ်ပါ? ဟုတ်ပါတယ်။ Essaouira မြောက်ဘက် ၁၇၃ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိပြီး ၁၈ ရာစုအဆောက်အအုံများနှင့်အဏ္ဏဝါခံတပ်အမျိုးမျိုးရှိသောလှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာရင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုမသွားဘဲနေလိမ့်မည်။ လမ်းကြားများ၊ လှပသောအသေးစိတ်အချက်အလက်ရှိသောအပြာရောင်တံခါးများပါသောအဆောက်အ ဦး များရှိပြီး၊ pasha, အနုပညာပြတိုက် ...
Agadir မှကီလိုမီတာ ၁၅၀ ကိုကျော်ပြီး ၁၆၆ အထိသွားနိုင်သည် Tafroute, ပုံမှန်အားဖြင့် Moroccan တောင်တန်းတစ်ရွာသဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြို့၏အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပြီး၎င်း၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူထူးခြားစွာဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည် Ait Mansour ၏ Canyon နှင့် သမိုင်းဝင်အနုပညာ။ အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာ၊ တောင်ဘက် ၉၇ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိအက်တလာဆန့်ကျင်ရေးတောင်တန်းကြီး၏အဆုံးမှာဖြစ်သည် Tiznit၁၉ ရာစုမှထင်ရှားသောခံတပ်များနှင့်၎င်း၏ဘာဘာရတနာစျေးကွက်နှင့်အတူ။ စျေးကွက်အင်္ဂါနေ့မှာဖြစ်ပါတယ်
ကီလိုမီတာ ၆၀ အကွာတွင်ရှိပြီးမြောက်ဘက်တွင်လည်းပိုမိုနီးကပ်စွာတည်ရှိသည် Valle Paraísoနှင့်၎င်း၏ကျေးလက်ဘဝ။ နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဗာဒံသီးနှင့်သံလွင်ပင်များကြားတွင်ခြေလျင်ခရီးလှသည် တောင်ငယ်များနှင့်မိုးကောင်းကင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုခံစားရင်းရွာငယ်လေးများကိုလည်းသိကျွမ်းပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသည်။ ဒေသခံများသည်အားသာချက်ယူပြီးထွက်ပြေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်တစ်ပတ်အတွင်းသွားလျှင်အရာအားလုံးတည်ငြိမ်မည်။
Souss ချိုင့်၌မြို့၏မြို့ဖြစ်ပါတယ် Taroudant, ၎င်း၏ကြီးမားသော terracotta အရောင်နံရံများနှင့်အတူ ပြီးတော့သင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရောင်အသွေးစုံတဲ့စျေးကွက်တွေ။ မြို့ပတ်လည်ရှိအုတ်နံရံများကိုလမ်းလျှောက်။ ကက်ဘ်ဘားခရိုင်ရှိလမ်းဆုံလမ်းခွများကိုသင်မြင်တွေ့ရမည်။ Agadir ကနေကီလိုမီတာဘယ်လောက်ပါလဲ? Taroudant သည် ၈၈ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်။
သင်လှိုင်းစီးချင်ပါသလား ထိုအခါ တဟားဟား သင့်ကိုစောင့်နေတယ် Isaအလွန်လူကြိုက်များကမ်းခြေ နွေရာသီလများတွင်ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားများအကြား, surfing တစ်နှစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်။ သင်ဟာအစပြုသူဖြစ်စေ၊ ပညာရှင်ဖြစ်စေဖြစ်စေ Surf သည်ဤနေရာတွင်ရှူရှိုက်မိသည်။ နောက်ဆုံးသင်ကမိကျောင်းများကိုနှစ်သက်လျှင် Agadir မှ ၁၄ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိသဘာဝအရံအသစ်သို့သွားနိုင်သည်။ ဒီမှာနေပါ နိုင်းလ်မိကျောင်းအန္တရာယ်ရှိသော်လည်းမကြာသေးမီကအစုလိုက်မျိုးစိတ်များသည်အထိ။
Este သစ်ပင်ကြီး သူတို့၏သဘာဝနေထိုင်မှုအခြေအနေများကိုတုပရန်နှင့် visitors ည့်သည်များအားလမ်းပြပေးသည့်ခရီးများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း Agadir ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုပါကမ်းခြေများ၊ တောင်တန်းများ၊ တောင်တန်းများ၊ သမိုင်းကြောင်း၊ နံရံများ၊ လှေစီးများ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » မော်ရိုကို » Agadir, မော်ရိုကိုအတွက် ဦး တည်ရာ